अब म सरकारसंग केही चाहन्न: माहाविर पुन (भिडियो सम्वाद) | KTM Khabar
२०७३ साउन २९ गते १३:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । एउटा समय थियो जुन समय माहाविर पुन हरेक पत्रपत्रिका, अनलाईन, रेडियो तथा टेलिभिजनहरुका हेडलाईन बनेका थिए । कारण हो उनले प्रविधि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान । उनको यही कार्यबाट म्यागेसेसे पुरस्कार विजेता पनि भए । म्याग्दी जिल्लामा जन्मिएका पुन आईएसीसम्म नेपाल मै पुरा गरेर बाँकी ब्याजलर र मास्टर्स अमेरिकामासक्काएर नेपाल फर्किएका हुन् । अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र बनाउका निमित्त चार वर्षसम्म सरकारको ढोका चिहाएर दिक्क भएका उनै प्रविधि अभियानता महाविर पुनसँग ktmkhabar.com का लागि रवि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
स्वागत छ सर
तपाई प्रविधि अभियन्ता हो नि ?
अब खै,अभियन्ता के हो मलाई त्यति थाहा छैन । तर म विभिन्न किसिमका कामहरु गर्ने गाउँ गाउँ डुुल्दै हिड्ने अभियन्ता चैँ हुँ ।
तपाईले परिकल्पना गर्नु भएको थियो म अभियनता हुन्छु भनेर ?
म अभियनता हुन्छु नै भनेर परिकल्पना गरेको पनि हैन र मलाई कसैले जवरजस्ती गराएर यो काममा लगाएको पनि हैन मेरो आफ्नु खुशीले स्वविवेकले गाउँ घरमा डुल्ने र अफ्नै खुशीले काम गरेको हुँ । यस्तो हुन्छु भनेर सोचेको थिईन ।
तपाई त अमेरिकामा पढ्नु भएको विद्यार्थी, नेपालीहरु अमेरिका जान मरिहत्ते गर्छन तर तपाई नेपालमा किन फर्कनु भयो ?
हो, म अमेरिका पढेको विद्यार्र्थी हुँ । तर कुरा कस्तो हो भने आफूले सुनेको तर नदेखेको कुरो महत्व बढी हुन्छ अथवा त्यसको भ्यालु बढी गर्ने चलन छ अमेरिकामा पुगेपछि केकेन हुन्छ भन्ने सोचई छ ,त्यो गलत सोचाई भने हैन । त्यो सबैले सोचेकै कुरा हो । तर त्यहाँ अमेरिकामा गएर के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर केही समय बिताएपछी थाहा हुन्छ । अमेरिकाको जिवन सजिलो छैन, बाच्नलाई नेपालको जिवन धेरै सजिलो लाग्छ मलाई । त्यहाको जिवन भन्दा यहाको सहज जीवन मैले रोजेको हो । मैले चौबिस बर्ष भयो डुलेर विताई रेहेको छु, तर अमेरिकामा त्यो सम्भब थिएन ।
अमेरिकामा तपाईले कति पढ्नु भयो नि ?
ब्याचलर्स र मास्टर्स चाहि मैले अमेरिकामै गरेको हुँ ।
पढाई सकेपछी तपाईलाई नेपाल फर्कन्छु भन्ने लाग्यो हो ?
नेपाल त आउनु पर्यो नि, मेरो आफन्तहरु यही हुनुहुन्छ । परिवारहरु, इस्टमित्र नेपालमै भएपछी आउनु पर्यो नि । नेपालमा आउनु पर्ने अर्को कारण पनि के हो भने अमेरिकाले मलाई त्यति तानेन भनौँन मलाई अमेरिका आकर्षक बनेन । जती मान्छेले सोच्छन नि, त्यहा भन्दा त यहाँ मलाई धेरै सजिलो छ त्यसैकारण म नेपाल आएको हुँ ।
तपाईले म्याग्दिमा गएर ईन्टरनेट निस्तार गर्दै गर्दा अप्ठ्यारो भएन ?
म्याग्दिमा ईन्टरनेट विस्तार गर्छु भनेर आएको पनि हैन फेरी नेपालमा यस्तो गर्छु भनेर कुनै किसिमको योजना बनाएर आएको पनि हैन र के गर्ने भन्ने कुरा केही थाहा पनि थिएन । म सँग पैसा पनि थिएन सपोर्टको लागि दाताहरु पनि थिएनन् । र अमेरिकाको विस्वविद्यालयमा पढेको ज्ञान गाउमा काम लाग्ने त कुरै भएन । म गाउमा पहिले नै ईन्टरनेट जोड्ने भनेर हिडेको हैन, पहिले मैले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्ने काम गर्दै जादा कम्युनिकेशनको लागि र्ईन्टरनेट ल्याउने कुरा भएको हो र यो ईन्टरनेटले के कति सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा म आफैलाई पनि थाहा थिएन, काम गर्दै जादा यो टेक्नोलोजिले फईदा हुने रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाँए ।
गर्हो भएन, त्यत्रो पढेर आएको युवा गाउ गाउ डुल्दै हिड्दा के भने गाउले ले ?
हैन गाउले ले भन्नु त के नै भन्थे र गउलेलाई सहयोग गरिरहेको थिए । राम्रै भएको थियो, पछाडी कुरा काटे होलान तर राम्रै थियो ।
यो ईन्टरनेट जोड्नलाई पैसा चाही कहाँवाट जुटाउनु भयो ?
अब ईन्टरनेटको मात्र कुरा नगरौ, पैसा भन्ने चिज मैले कैले पनि त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन । सबभन्दा ठुलोकुरा ईन्टरनेटको लागी होस चाहे । जुन सुकैको लागि होस मैले थुप्रै कामहरु गरे जुन कुरा मिडियालाई पत्तै छैन म विश्वबिद्यालयहरुमा प्रशिक्षन दिन जादा बताउछु । यस्ता सबै कामहरु गर्दा मैले पैसालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिन मैले जहिल्यैपनि आईडियालई प्राथमिकतामा राखे । पैसा भन्दा आईडिया ठुलो हो । मैले यत्रो पच्चिस बर्षकाम गर्दा पैसाले अड्काएको छैन । पैशा हो ढिलो चाडो हुन्छ तर अउछ । काम हुनु पर्यो त्यो कामले जनतालाई फाईदा गरेको हुन पर्यो । पैशा भन्नेकुरा जनतावाटै आउछ । मैले यत्रो काम गर्दा पैसाको निम्ति चिन्ता लिनु परेन ।
राष्टिय आविस्कार केन्द्र खोल्न लाग्नु भएको छ र यसमा तपाई आफैले केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा दान दिनुभएको छ नि ?
हो हो ,राष्टिय आबिस्कार केन्द्र भनेको मैले बिस बर्षसम्म नेपालमा काम गरेपछि आएको ज्ञान हो । मैले शिक्ष स्वास्थ्य, आएआर्जन, टुरिजम समन्धि जतिपनि काम गरे त्यतिखेरसम्म म धेरै बिजी पनि भए तर बिस बर्ष पछी म केकुरामा स्पष्ट भए भने मैले जतिपनी काम गरे केहि जनतालाई सहज त बनायो तर नेपाललाई यसरी विकसित बनाउन चाहिँ सकिदैन भन्ने बुझ्न थाले यसरी गाउगाउ डुल्दा नेपाल विकसित चाहि नबन्ने रहेछ । यो काम बाहेक राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाब पर्ने काम गर्नु पर्छ र नेपाललाई विकास गर्नु पर्छ जती गरे गरिसके त्यो त फर्केर आउदैन अब वाकि समय चाहि केही गर्नु पर्छ भन्ने लागेर यो राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र खोलेको हो । र यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्थिक बिकास गर्नु हो । अर्थिक बिकास गर्न चाहिने सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको बिज्ञान तथा प्रबिधि हो त्यसमा मानब पुजी पनि जोडिन्छ । बिज्ञान, प्रबिधि र पैसाभन्दा पनि ठुलो पुजी भनेको मानव पुजी हो । यो मैले धेरै विकसित देशहरु घुम्दा देखेको कुरा हो ।
सकारसंग पनि केही माग्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने सुनिन्छ, के माग्नु भएको ?
माग्दै थिए तर अब माग्दिन, चार बर्षसम्म मागे कै हो तर खासै सुनुवाई भएन ।
तपाईले सञ्चार क्षेत्रमा के विकृति देख्नु हुन्छ नि ? अनसन पनि बस्न लाग्नु भयो भन्ने सन्चारमाध्यममा आएको छ नि ?
यो अनसन मैले मेरो स्वार्थको लागि बस्छु भनेको हैन । अनि फेरी राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको लागि पनि अनसन बस्छु भनेको हैन । जसरी स्वाथ्य क्षेत्रमा विकृतिहरु छ त्यसै गरि सन्चार क्षेत्रमा पनि छ । सन्चार क्षेत्रमा पनि माफिया करण मनोमानी करण छ । यहाका टेलिकम माफियाहरु जति पनि छन् इनीहरुले एउटा सिन्को पनि भाचेका छैनन । कोषमा करोडौ हुदा पनि भएको पैसालाई उपभोग गर्न नसक्ने सरकार के सरकार ? त्यसमा कामगर्ने कर्मचारी के कर्मचारी ? कोषमा थिएन भने मलाई भन्नु केही थिएन तर हुदा हुदाहुुदै पनि जनतालई सुविधा दिने कुरामा किन हिचकिचाउछ सरकार ? यो कुरा मैले लगातार सात आठ बर्ष देखि हरेक सन्चार मन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भनिसके तर केही गर्दैनन् । यसैको विरोधमा चाहि मैले अनसन बस्छु भनेको हुँ ।
तपाई अब सरकारसंग चाहि के चाहानु हुन्छ ?
अव म केहि चाहान्न । मैले चार बर्षसम्म धाए तर केहि भएन । मैले राष्ट्रिय अनुसन्धा केद्र बनाउनका निमित्त र यसलाई सस्टेन गराउनको निमित्त सकारलाई गुहारे तर केहि भएन अब फेरी म जनता मै फर्किएको छु ।
तपाई अहिले आफ्नो कामप्रती खुशी हुनुहुन्छ ?
खुसि त अहिले भए । जति म चार बर्षसम्म सरकारको ढोकामा पुगे । चाहार्दा चाहार्दा दिक्क भैसकेको थिए, मन्त्रि भेट्यो सचिव भेट्यो चिया खायो आयो काम केहि हुदैन तर अहिले जनतामा आएको छु । संसार भरबाट रेस्पोन्सहरु आएका छन् । फोन उठाउने पनि फुर्सद छैन । अब जनताले पनि राष्ट्रिय निर्माणमा सेवा गर्ने मौका पाए । यसका लागि सरकार धन्यवादको पात्र छ ।
तपाई सानो छँदा, पछि गएर यस्तो ठुलो मान्छे बन्छु भन्ने लाग्थ्यो ?
अभियानता बन्छु भनेर त लागेकै हैन । मैले गर्दै गरेका कुराहरु मिडियामा आउन थाले, कताकताबाट पुरस्कार पनि आयो । फेरी मलाई घमण्ड पनि छैन । म एकदम फ्रि लाईफ बिताउछु भनेर हिडेको मान्छे हु , यो हुन्छु अभियानता बन्छु भन्ने त मलाई लागेकै थिएन ।
कस्तो सुन्दर मान्छे ? पैसा पनि नचाहिने ?
म अचम्मको मान्छे । मान्छेहरु मध्यको एउटा मान्छे ।
अबको सपना चाहि के छ नी ?
मेरो सपना भनेको यही हो, यही राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई बलियो जग बनाईदिने, यो केद्र भनेको छोटो समयको लागीको प्रोजेक्ट हैन । यो दरसन्तानसम्म जाने केन्द्र हो । प्रविधिको क्षेत्रमा वलियो जग बनाउने रिसर्चको क्षेत्रमा बिश्व मै नमुना युनिभर्सिटी वनोस् भन्ने मेरो सपना हो । दुनिया आएर हाम्रै देशमा अध्यन गरुन भन्ने मेरो सपना हो ।
अन्त्यमा केहि भन्नु हुन्छ ?
बिज्ञान तथा प्रबिधिको महत्व सबै नेपालीले बुज्न सकुन मैले मेरा लागी गरेको हैन मैले त देश निर्माणको लागी केहि दिन लागेका हुँ । मैले परिकल्पना गरेर निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र देश विकासको काम हो । सहयोग गर्नुस् सक्नुहुन्छ भने पैसा दिनुस, सक्नु हुन्न भने आइडिया दिनुहोस, त्यो पनि सक्नु हुन्न भने यसको महत्व बुझाइदिनुस् म यत्ति भन्न चाहान्छु ।
महाविर पुनसँगको भिडियो कुराकानी:-